April 1, 2017 No Comments News, Somali 2,624 views
Jilaaga caanka ah ee Salman Khan ayaamahan wuxuu dalxiis u jiray jaziiradda Maldives xagaas oo uu kaga qeyb galayay Dhalashadda wiilka uu abtiga u yahay ee Sanad jirsaday, waxaana la ogaaday warbixin Ka farxin doonta dad badan oo aad u xiiseeyn jiray Taxanaha Dhoom warkaas farxadda lehna wuxuu yahay in Salman Khan uu Laadar Ku jili doono filimka Dhoom 4 waxaana lagu ogaaday kadib markii la Arkat Salman Khan oo Akhrinaya sheekadda filimka.
Sida lawadda ogsoonyahay filimkaan waxaa sameyntiisa lagu guda jirey sanadihii u danbeeyay kolkaas oo lala xiriiriyay dhowr jilaa oo magac weyn ku leh bollywoodka inay jili doonaan balse arintaas biyo kama dhibcaan bay noqotay wax rasmiya lama shaacin. Waxaa aad loola Xiriiriinayay filimkan Bhaijaan of Bollywood Salman iyo shirkadda Yash Raj Films inay iska kaashan doonaan filimkaan shirkadaana waa soo saaraha filimkaan.
Arinta kale oo xiisaha leh waxay tahay in Ay Katrina Kaif ku wehelin doonto filimkaan iyadoo go’aamadaan la qaatay inta ay wada jilayeen Filimka Tiger Zinda Hai iyadoo filimkaan (Dhoom 4) ay wax kasoo saareyso shirkada Yash Raj Films. Silamida Sidii horey looga barteyba filmkaan waxa kaso muuqan Doonan Abhishek Bachchan iyo Uday chopra waxaana la rajeynayaa inuu noqdo qaybtan mid ka xiiso badan qeybtii ka horesay tan ee uu Aamir Khan sameeyay.
Gabo-gabadii waxaa arintaan cadeeyay Sawir laga qaaday Salman oo u ekaa inu Akhrinayay Sheekadda filmkaan kolkuu ku sugnaa Maldives.
Akhriste Jilaagee jeclaan lahayd inuu Kasoo muuqdo Dhoom 4 ?
CAJIIB! Muxuu ula jeeda Shahrukhan qoraalkan uu soo dhigay ciwaankiisaTwitterka?
LAYAAB: Maxaa kala qabsaday xidiga Amitabh Bachchcan iyo boqorada Ingiriiska ee Elizabeth 2?-ka ogow halkan